Apacer MicroSD Class10 64GB with Adapter
Macbook cover (air 13",pro13")
Soft Case for External HDD
Remax PC Apple MacBook 12"
14,500.00 K 14,500.00 K 14500.0 MMK
KB Protector 15.6"
1,000.00 K 1,000.00 K 1000.0 MMK
KB Protector 14"
USB မှ Audio ပြောင်းပေးနိုင်သော Adapter ဖြစ်သည်။ အသံ Audio အလုပ်မလုပ်သော PC များ Laptop များတွင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Driver တင်စရာမလိုဘဲ Plug and Play အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသံတိုးနိုင်၊ ကျယ်နိုင်၊ ကျော်နိုင်၊ ရပ်နိုင်သော ခလုတ်များပါဝင်သည်။
Laptop Skin (cartoon)
LCD Cleanser Q6
ကွန်ပျူတာ, တီဗွီ, ကင်မရာ၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် စသည့် LCD မျက်နှာပြင်နှင့် ကီးဘုတ်များအား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရည် 30ml ပါဝင်ပြီး သုတ်ရန်အတွက် ချည်သားအဝတ်စနှင့် ကီးဘုတ်များကြားတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် Brush တစ်ခုပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ဖုန်မှုန့်များကို လေဖြင့် မှုတ်နိုင်ရန်အတွက် လေမှုတ်လုံးတစ်ခုလဲ ပါဝင်သည်။
LCD Cleanser K003
ကွန်ပျူတာ, တီဗွီ, ကင်မရာ၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် စသည့် LCD မျက်နှာပြင်နှင့် ကီးဘုတ်များအား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရည် 200ml ပါဝင်ပြီး သုတ်ရန်အတွက် ချည်သားအဝတ်စနှင့် ကီးဘုတ်များကြားတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် Brush တစ်ခုပါဝင်သည်။
OKER OTG Card Reader + USB Hub C-1505
Card Reader + USB Hub နှစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်သည်။
USB, MicroUSB ခေါင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များအတွက် OTG Function အထောက်အပံ့ပြုသည်။
MicroSD Card, SD Card, T-Flash Card များထည့်သွင်းနိုင်သည်။
USB 2.0 Port (3) ပေါက် ပါဝင်သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များအား Memory stick များ Memory card များနှင့် ဒေတာကူးပြောင်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များအား USB Device များဖြစ်သော ကီးဘုတ်၊ မောက်စ် စသည်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. RI mini i8 Backlight;
4. For Gaming;
5. For TV BOX PC Laptop Tablet;
6. PC Remote for Home entertainment, multi-media education, training, conference, presentation controlled with computer.
7. Remote control for Google Android TV dongle.
Jack OTG USB-Micro USB
* Size: USB 2.0 OTG Micro USB male to female jack adapter
* For connection, data transfer data.
USB F to Micro USB M + F
• Cable OTG USB 2.0 A Female to Micro USB B male, with power connector Micro USB B female for smartphones and tablets
• Simply connect the Micro USB to the phone and the pen drive (or other device) to USB A female connector
• Allows you to transfer photos, videos, documents and other data between your phone and the external memory
• Provides high-speed data transfer from smartphone / GPS / PDA (USB 2.0 and 1.1) toacompatible PC